မြန်မာ့စီးပွါးရေး - မှတ်စုစာအုပ်
မြန်မာ့စီးပွါးရေး ဟာ ကမ္ဘာမှာ ဖွံဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံး ထဲမှာပါဝင်နေသည်။ မဲခေါင်ဒေသ စီးပွါးရေးတိုးတက်မှု၏ နိမ့်လွန်းသော နူံးထားဖြင့် မြန်မာနိူင်ငံ၏ စီးပွါးရေးသည် GDP ပျှမ်းမျှနူံးထား ၂.၉ ရာခိုင်နူံးသာရှိလေသည်။
ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီအဖြစ်ကျရောက်စဉ်တုန်းက ကမ္ဘာအနှံ.ကို ဆန်များတင်ပို.ရောင်းချခြင်းအားဖြင်.အရှေ.တောင်အာရှ မှာ အချမ်းသာဆုံးနိူင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဆန်ပို့ဆောင်မှုအများဆုံးနိူင်ငံအဖြစ် တစ်ကြိမ်သတ်မှတ်ခံခဲ.ရသည်။ မြန်မာနိူင်ငံဟာဆိုရင် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များနှင့် လုပ်အားအရင်းအမြစ်များ ချမ်းသာသောနိူင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမှာ ထွက်ရှိတဲ.ကျွန်းသစ်ရဲ. ၇၅ ရာခိုင်နူံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မြန်မာနိူင်ငံ ဟာ လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်လာစေမယ်လို.လည်း ယုံကြည်မိပါတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ ပါလီမာန် အစိုးရ ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု က လူမှုဖူလုံရေး နှင်.သက်သာချောင်ချိရေး ကို ဦးတည်ဆောင်ရွှက်ခဲ့သည်။ငွေဖောင်းပွလာမှုကြောင့် နိူင်ငံခြားဆန်ပို့ဆောင်မှု သုံးပုံနှစ်ပုံ စတင်လျော.ကျလာခဲ့သည်။တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ဦးနေ၀င်း အစိုးရ ကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး စက်ရုံ အလုပ်ရုံအများအပြားကိုပြည်သူပိုင် အဖြစ် သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း နှင့် လက်ရှိသုံးစွဲနေသောငွေကြေးကိုတရားမ၀င် ငွေစက္ကူ အဖြစ် ကြေငြာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိူင်ငံ၏ စီးပွါးရေးမှာသိသိသာသာ ကျဆင်းလာခဲ့ရသည်။
၁၉၈၈ ပြီးနောက် အကြွှင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။နိူင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုများအတွက် တော်ရုံသင့်ရုံရှိသော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး နိူင်ငံခြားမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အချို.ကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ.သည်။
မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ငွေလဲလှယ်နူံးထား ဟာ ကျူဘားနဲ့ ပုံစံတူပြီး နိူင်ငံအတွင်း ကျပ်ဖြင့်သုံးစွဲကြသည်။
၂၀၀၅ခုနှစ်နှင့်၂၀၀၇ခုနှစ်ကာလအတွင်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ရာခိုင်နူံးမှာ ၃၀.၁ ရှိသည်။ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဟာ မြန်မာ့စီးပွါးရေးအတွက် အပြင်းထန်ဆုံး ပြသနာ ဖြစ်သည်။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ၏ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဧပရယ်လ အစိုးရ အလုပ်သမားများကို လစာတိုးမြှင့် ကတည်းက အခြေခံလူသုံးကုန်ဈေးနူံးများမှာ ၃၀ ရာခိုင်းနူံးမှ ၆၀ ရာခိုင်းနူံးအထိမြင့်မားခဲ့ သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ် အနည်းငယ်က တရုတ် နိူင်ငံ နှင့် အန္ဒိယ နိူင်ငံ တို့ကသူတို့၏ စီးပွါးရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် မြန်မာနိူင်ငံ၏ အစိုးရကို ထောက်ခံပေးခဲ့သည်။အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၊ကနေဒါ ၊ဥရောပ နိူင်ငံများကတော့ မြန်မာနိူင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင်.ကုန်သွယ်ရေး ကို စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့ ထားခဲ့သည်။မြန်မာနိူင်ငံကို နိူင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသောနိူင်ငံများကတော့ တရုတ်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ နိူင်ငံ ၊စင်ကာပူ ၊တောင်ကိုးရီးယား ၊အိန္ဒိယ နှင့် ထိုင်း နိူင်ငံ တို.ဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာနိူင်ငံဟာ စိုက်ပျိုးရေးနိူင်ငံဖြစ်ပြီး ဆန်ကို အဓိက စိုက်ပျိုးပါတယ်။စိုက်ပျိုးနိူင်သော ဧရိယာက နိူင်ငံ ရဲ. ၆၀ ရာခိုင်နူံး ထိရှိပြီး စားသုံးတဲ. အစားအစာများရဲ. ၉၇ ရာခိုင်နူံးက ဆန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။International Rice Research Institute (IRRI) ရဲ.စာရင်းပြုစုမှုအရ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ၁၉၉၆-၉၇ ဆန်ထွက်နူံး တန်ချိန်(၁၉)သန်းရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၇ တုန်းကတော. တန်ချိန်(၁၄)သန်းသာ ရှိတယ်လို့ စာရင်းပြုထားတာတွေ.ရှိရသည်။
မြန်မာနိူင်ငံ၏ စီးပွါးရေးကို ခောတ်မီနည်းပညာများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းမရှိ ၊ လုပ်သားကျွမ်းကျင်သူ မရှိခြင်းတို.ကြောင့် စီးပွါးရေး အောင်မြင်လာဖို.အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ် လို.ပညာရှင် များက ဝေဖန်ထားပါသည်။ယနေ့ မြန်မာနိူင်ငံတွင် စီးပွါးရေး အဖွဲ့အစည်းများ လုံလောက်အောင်မရှိသေးပါ။ ထိုင်းနယ်စပ်မျဉ်းတလျောက်ကုန်သွယ်မှု ပြုကြပြီး တရားမ၀င်ဆေးဝါးများလည်း တင်ပို့ရောင်းချခြင်း ပြုကြသည်။
မြန်မာနိူင်ငံ ဟာ ကမ္ဘာမှာ ဘိန်း(opium)ထုတ်လုပ်မှု ဒုတိယအများဆုံးနိူင်ငံလည်းဖြစ်သည်။
အခြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအနေနဲ့ကတော့ စိုက်ပျိုးရေး ၊သစ်လုပ်ငန်း ၊ဆောက်လုပ်ရေး ၊တွင်းထွက် ၊သတ္တု နှင့် လောင်စာဆီ လုပ်ငန်း များ ကိုလုပ်ကိုင် ကြသည်။
မြန်မာနိူင်ငံတွင်ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများကတော့ စိုက်ပျိုးရေး ၊စက်မှုလုပ်ငန်းငယ်များနှင့်သယ်ယူပို.ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစသည်တို့ဖြစ်ပြီးဆန်ကုန်သွယ်ရေး ၊
စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများနှင့် လောင်စာ ဆီ နှင့် စွမ်းအင် ဆိုင်ရာများကို အစိုးရမှ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
မြန်မာ့ ဓါတ်ဆီနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE) ဟာ မြန်မာနိူင်ငံ၏ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး သဘာဝဓါတ်ငွေ့ နှင့်လောင်စာဆီ များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း ကိုပြုလုပ်သည်။
အက်ဒမာန် ပင်လယ် ရတနာ စီမံကိန်းမှ လောင်စာဆီ များထုတ်လုပ်ပြီး မြန်မာမှ ထိုင်းနိူင်ငံသို.တင်ပို.ရောင်းချပါသည်။
မြန်မာနိူင်ငံမှ စီးပွါးရေး ဟာ ပုလဲ ၊ကျောက်စိမ်း တို့ကဲ့သို့ အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ များကို ရောင်းချခြင်းကို မှီခိုနေရပါတယ်။ ပတ္တမြားရောင်းရငွေ ဟာ မြန်မာနိူင်ငံရဲ. အကြီးမားဆုံး ၀င်ငွေ တစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာဈေးကွက်မှ ၉၀ ရာခိုင်နူံးသော ပတ္တမြားတွေကို မြန်မာနိူင်ငံ မှ လာတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ထိုင်းနိူင်ငံဟာ မြန်မာနိူင်ငံ မှ ကျောက်မျက်ရတနာများကို အဓိက ၀ယ်ယူသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Burma's "Valley of Rubies", the mountainous Mogok area, 200 km (125 miles) north of Mandalay, is noted for its rare pigeon's blood rubies and blue sapphires.
၁၉၉၂ ခုနှစ် မတိုင်မီ မြန်မာနိူင်ငံသို့ ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု မှာ ၇၅၀၀၀၀ ရှိခဲ့ရာမှ နှစ်စဉ် လျော့ ကျလျက်ရှိသည်။
Since 1992, the government has encouraged tourism in the country. However, fewer than 750,000 tourists enter the country annually. Aung San Suu Kyi has requested that international tourists not visit Burma. The junta's forced labour programmes were focused around tourist destinations which have been heavily criticised for their human rights records. Even disregarding the obviously governmental fees, Burma’s Minister of Hotels and Tourism Major-General Saw Lwin recently admitted that the government receivesasignificant percentage of the income of private sector tourism services. Not to mention the fact that onlyavery small minority of impoverished ordinary people in Burma ever see any money with any relation to tourism. Much of the country is completely off-limits to tourists, and the military very tightly controls interactions between foreigners and the people of Burma. They are not to discuss politics with foreigners, under penalty of imprisonment, and in 2001, the Myanmar Tourism Promotion Board issued an order for local officials to protect tourists and limit "unnecessary contact" between foreigners and ordinary Burmese people.
The public sector enterprises remain highly inefficient and also privatization efforts have stalled. The estimates of Burmese foreign trade are highly ambiguous because of the great volume of black market trading. A major ongoing problem is the failure to achieve monetary and fiscal stability. Due to this, Burma remainsapoor country with no improvement of living standards for the majority of the population over the past decade. The main causes for continued sluggish growth are poor government planning, internal unrest, minimal foreign investment and the large trade deficit. One of the recent government initiatives is to utilize Burma's large natural gas deposits. Currently, Burma has attracted investment from Thai, Malaysian, Russian, Australian, Indian, and Singaporean companies.
“ Burma,aresource-rich country, suffers from pervasive government controls, inefficient economic policies, and rural poverty. The junta took steps in the early 1990s to liberalize the economy after decades of failure under the "Burmese Way to Socialism," but those efforts stalled, and some of the liberalization measures were rescinded. Burma does not have monetary or fiscal stability, so the economy suffers from serious macroeconomic imbalances - including inflation, multiple official exchange rates that overvalue the Burmese kyat, andadistorted interest rate regime. Most overseas development assistance ceased after the junta began to suppress the democracy movement in 1988 and subsequently refused to honor the results of the 1990 legislative elections. In response to the government of Burma's attack in May 2003 on Aung San Suu Kyi and her convoy, the US imposed new economic sanctions against Burma - includingaban on imports of Burmese products andaban on provision of financial services by US persons. A poor investment climate further slowed the inflow of foreign exchange. The most productive sectors will continue to be in extractive industries, especially oil and gas, mining, and timber. Other areas, such as manufacturing and services, are struggling with inadequate infrastructure, unpredictable import/export policies, deteriorating health and education systems, and corruption. A major banking crisis in 2003 shuttered the country's 20 private banks and disrupted the economy. As of December 2005, the largest private banks operate under tight restrictions limiting the private sector's access to formal credit. Official statistics are inaccurate. Published statistics on foreign trade are greatly understated because of the size of the black market and unofficial border trade - often estimated to be as large as the official economy. Burma's trade with Thailand, China, and India is rising. Though the Burmese government has good economic relations with its neighbors, better investment and business climates and an improved political situation are needed to promote foreign investment, exports, and tourism. ”